Inkampani Yethu - Shimge Pump Industry Group Co., Ltd.
Ikhaya > Malunga neShimge > Yethu nkampani
Eyasungulwa ngowe-1984 kwaye ibekwe kwindawo ephakathi kwesebe lempompo yamanzi yaseTshayina. • I-Daxi Idolophu, isixeko saseWenling sePhondo leZhejiang, iShmge Pump Industry Group Co., Ltd ibonakalisiweyo yenkampani eneemveliso ezibandakanya ukuvelisa iindidi zezipompo kunye nezixhobo zokulawula. Kwiminyaka emithathu edlulileyo, i-SHIMGE Pump Industry Group iye yazinikela kuphando lobugcisa, ukuvelisa kunye nokuthengiswa kwazo zonke iintlobo zamapompo kunye nezixhobo zokulawula, kunye nokubonelela ngeepompo zokuqala kunye neendlela zokuncedisa amanzi kwihlabathi.
Ukuhambelana nomkhiqizo we-'â € ™, umgangatho obanzi kunye nokulawulwa kwendawo ukususela ekumisweni kwayo, inkampani idlulisele iSO9001, ISO14001 kunye ne-OHSAS18001 isatifikethi, eyamkelwe ukuphathwa kokusebenza ngokuhambelana neGG / T 19580, kwaye yakha inkqubo yokuqinisekisa umgangatho. Ukongezelela koko, uye wasungula isikhungo esiphephayo esicwangcisa umzimba kunye nesikhemikhali, kunye nokuhlolwa kokusebenza kokufikelela kwiBakala B (ibanga lesi-1) kuhlolo oluqhutywa ngamagumbi asemthethweni. Ukongezelela, iimveliso zayo zidlulisele isatifikethi se-GS, i-CE kunye ne-UL, kwaye singahambelana nomyalelo we-RoHS.
Kwiminyaka engaphezu kwe-30, i-SHIMGE iye yazama ukubonelela iipompo eziphambili kunye neenkqubo zonyango lwezonyango zamanzi kwihlabathi, ukudala ubomi obuphezulu bantwini. Iyanamathela kwiimpawu eziphambili ze & quot; Imilinganiselo, i-Innovations, inzame yomnxweme I-Win-win & quot ;, ukwenzela ukubonelela ngamakhasimende e-value e-value, ukukhokelela kwinkqubela phambili yoshishini, kwaye ibenze inzuzo enkulu kwimboni yepompo yaseTshayina!
Ukugcina amandla, ukunyaniseka okuphezulu
Yakha abathengi abahlonishwa kakhulu
kunye neNkqubo yoLwaphulo lwamanzi Iisombululo zeQela loShishino
Ukubonelela ngeempompo eziphambili kunye neenkqubo zonyango zonyango lwezilwanyana zehlabathi kunye nokudala ubomi obuphezulu kumntu.
Ixabiso lokuQala kunye nokuLinqoba
Ukuphunyezwa kwemveliso esemgangathweni yokubonelela ukubonelela ngemveliso neenkonzo
Iipompo kunye nezixhobo zokulawula, umqhubi, imoto, i-generator, i-compressor yomoya kunye nezinto zokugcina izinto, ukuthengisa.
Amapompo zamanzi, izixhobo zokubonelela ngamanzi, icompressors zomoya; iziqendu kunye neengxenye zeemveliso ezikhankanywe ngentla apha, malunga no-20 uchungechunge, iinkcukacha ezingaphezulu kwe-2000 kunye neemodeli zidibanisa iimfuno zokunkcenkceshela kwezolimo kunye nezamahlathi, ukuthambisa kwamanzi asekhaya, ukusetyenziswa kwe-oksijeni yezilwanyana zasemaphandleni, ubuncinci besikhululo samanzi, ukukhutshwa kwamanzi, unyango lwamanzi / ucoceko lwamanzi, i-HVAC, i-metallurgy, iimaminerali, i-friji, amanzi oshishino, umhlobiso, izixhobo. Ukufumana ulwazi oluthe xaxa malunga neenkonzo eziqhelekileyo nezizenzekelayo ngokusekelwe kwimveliso engentla, nceda ubhekisele kwimodyuli yemveliso kunye nenkonzo yale website.